पुस २७ गतेको पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनमा सार्वजनिक विदा दिने भएको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस २७ गते सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले ट्वीटरमार्फत जनाएका छन्। यसअघि २०६३ को..
गोरखामा भूकम्प गएको ३० महिनामा बने मात्रै ४५ सय घर
गोरखा । ‘गोरखा भूकम्प’ गएको तीस महिना हुँदा सरकारी अनुदान रकम लिएर गोरखामा चार हजार ५८५ वटा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण भएका छन्। भूकम्पले करिब ७० हजार घर भत्किए पनि..
भोली शुक्रबार बिदा दिने सरकारको निर्णय, क्रिसमस डेमा पनि बिदा
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले भोलि शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । हजरत मुहम्मद सल्ललल्लाहो लैहे वोसल्लमको जन्म दिन बाह्र रव्विउलको अवसरमा बिदा दिने सरकारले निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, पौष..
आजबाट नेपाल र भारतमा एकैसाथ दुर्लभ पाटे बाघ गणना शुरु
रत्ननगर, चितवन । आजदेखि नेपाल र भारतमा एकैसाथ दुर्लभ पाटे बाघको गणना (अनुगमन) शुरु हुँदैछ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार अत्याधुनिक प्रविधिसहितको क्यामरा ट्रयापिङ विधिबाट बाघको गणना गर्न..
नेपालमा लगानीको सम्भावना अध्ययन गर्न यूएईबाट प्रतिनिधिमण्डल आउँदै
काठमाडौं । नेपालका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का राजदुत सैयद हम्दान नक्पितले नेपालमा लगानी तथा सहयोग सम्भावनको अध्ययन गर्न यूएईबाट उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल आउन लागेको बताएका छन् । बुधबार उपराष्ट्रपति..
त्रिशुलीमा बस खस्दा ६ जनाको मृत्यु २० घाइते
काठमाडौं । काठमाडौंबाट अर्घाखाँची जाँदै गरेको बस त्रिशूली नदीमा खस्दा ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने २० जना घाइते भएका छन् । लु २ ख २९१ नम्बरको बस र वीरगञ्जबाट काठमाडौं..
डोल्पामा सवैभन्दा बढी ८१ प्रतिशत मत खस्यो, कुन जिल्लामा कति मतदान ? हेर्नुस् सूची
काठमाडौँ। पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा झण्डै दश प्रतिशत कम मतदान भएको छ। हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा भएको मतदानमा तुलनात्मक रुपमा कम मतदान भएको हो। ३२..
मतदान समय सकियो, ६५ प्रतिशत मत खसेको अनुमान
काठमाडौं । पहिलो चरण अन्तर्गत ३२ वटा जिल्लामा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । केही ठाउँमा बाहेक देशभर निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ..
एसियाली विकास बैंकले दिने १५ करोड अमेरिकी डलर सरकारद्वारा स्वीकार
काठमाडौं । शहरी विकास तथा आधुनिकीकरणका लागि भन्दै एसियाली विकास बैंकले उपलब्ध गराउने १५ करोड अमेरिकी डलर नेपालले स्वीकार गर्ने भएको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसियाली विकास बैंकले सहयता..
करदाता सेवा कार्यालयका सुब्बा केशव स्थापित घुस लिँदालिँदै पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंको पुतलीसडकस्थित करदाता सेवा कार्यालयमा कार्यरत नायब सुब्बा केशव स्थापित घर्तीमगर सेवाग्राहीसँग घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले स्थापितलाई रंगेहात पक्राउ गरेको हो..
जनगायक खुसीराम पाख्रिनको हृदयघातको कारण निधन
काठमाडौं । पूर्व सांसद तथा जनगायक खुसीराम खुसीराम पख्रिनको हृदयघातको कारण निधन भएको छ । मंगलबार चितवनमा भरतपुरमा आयोजित वाम गठबन्धनको चुनावी सभा तथा प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहालको श्रद्धान्जली सभामा गीत..
अख्यिारद्धारा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पाण्डे पक्राउ
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ। मेनपावरसँग पैसा असुलेर अनिमियतता गरेको अभियोगमा पाण्डेलाई अख्तायरले पक्राउ गरेको हो। यसअघि नयाँ वानेश्वर इन्द्रेणी फुडल्यान्डबाट पक्राउ..
लमजुङमा नमूना मतदान : मतदान प्रक्रिया झण्झटिलो
लमजुङ । सोमबार अपराह्न फूलबारी मैदानमा चुनावी रौनक थियो। सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिएका म्यादी प्रहरीलाई भीड व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे भयो। मतदानका लागि पुरुष र महिलाको छुट्टाछुट्टै लाइन थियो। डोरी टाँगेर बनाइएको मतदान..
फिरौती नदिँदा व्यवसायी शरद गौचनको हत्या भएको खुलासा: गोली हान्ने पक्राउ, योजनाकार फरार
काठमाडौं । मागजति फिरौती नदिएका कारण निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले गौचन हत्यामा संलग्न ५ जनालाई पक्राउ गरि मंगलबार सार्वजानिक गरेको छ..
काठमाडौंको असन क्षेत्रलाई पनि सवारीसाधन मुक्त क्षेत्र बनाइने
काठमाडौं । काठमाडौंको अत्यधिक व्यस्त स्थानका रूपमा रहेका असन क्षेत्रलाई पनि सवारी साधन निषेध क्षेत्र बनाइने भएको छ । महानगरीय ट्राफिक महाशाखा र त्यस क्षेत्रमा रहेका वडाका प्रतिनिधि तथा व्यवसायीको सहभागितामा..
आफ्नै परिश्रमले १९ वर्षमा करोडपति २६ वर्षमा अर्बपति
२६ वर्षको उमेरमा आफ्नै क्षमताले अर्बपति बन्ने व्यक्ति संसारमा दुर्लभ छन् । यो उमेरमा त अधिकांश युवा पढाइमै व्यस्त हुन्छन् । कतिपय भने अध्ययन सकेर जागिरको सुरसार गरिरहेका हुन्छन् ।..
मुख्य सचिवमा लोकदर्शन रेग्मी, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओमा युवराज भुषाल नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा लोकदर्शन रेग्मी नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रेग्मीलाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेको हो । यसअघि उनि गृहमन्त्रालयमा सचिव थिए । त्यस्तै आज..
कुन जिल्लामा कति जनाले उमेद्द्धारी दिए (सूचीसहित)
काठमाडौं । मंसिर १० गते पहिलो चरणमा ३२ जिल्लामा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आइतबार ८०७ जनाको उमेदवारी परेको छ । निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको संयुक्त निर्वाचन संचालन..
भवन भट्टले १४ करोडमा किने निगमको बोइङ
काठमाडौं । भवन भट्टको बीबी एयरवेजले नेपाल एयरलाइन्सको बोइङ किनेको छ। व्यवसायिक रूपमा उडान अयोग्य भएको भन्दै नेपाल एयरलाइन्सले बिक्रीका लागि राखेको कर्णाली नामको उक्त विमान बीबी एयरवेजले टेन्डरमार्फत् किनेको हो। यसअघि..
भूकम्पपीडितलाई धितो जमानीबाट ऋण उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि संशोधन गरी धितो जमानीबाट पनि ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले भूकम्पपीडितलाई घर..
आयल निगमका खड्कालाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले खड्कालाई हटाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै उक्त..
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमलाई हटाइयो
काठमाडौं । पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई पदबाट हटाएका छन् । मन्त्रालयले गौतमलाई दुई पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सोमबार स्पष्टीकरण पत्र बुझाएलगत्तै गौतमलाई मन्त्रीलाई..
२५० जना यात्रु बोकेको जापानी जहाजमा चरा ठोकियो, आकस्मिक अवतरण
टोकियो । जापानको एक विमानमा चरा ठोकिएपछि सोही विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण गरेको समाचार छ । उडेको केही मिनेटमै सो विमान अवतरण गरेको थियो । जापानको टोकियोस्थित हानेदा विमानस्थलबाट मङ्गलबार बिहान न्युयोर्कका..
चीनबाट ल्याइएको ८८ किलो सुन काठमाडौंमा बरामद, दुईजना पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंको क्षेत्रपाटीबाट ८८ किलो सुन बरामद गरिएको छ । केरुङ नाका हुँदै चीनबाट काठमाडौं पुर्याइएको उक्त सुन क्षेत्रपाटीस्थित एक पार्किङमा राखिएको गाडीबाट बरामद गरिएको हो । महानगरीय प्रहरी अपराध..
दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय, प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोक्न सहमति खोजिने
काठमाडौँ । यसअघि एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको सरकारले आज दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने बताएको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंसिर १० गतेबाहेक दोस्रो चरणमा..
नवलपरासीमा बाढीले कृषिमा ७७ करोड र शिक्षामा २१ लाखको क्षति
नवलपरासी । नवलपरासीमा गत साउन महिनामा आएको बाढीले कृषिमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । बाढीले करिब रु ७७ करोड ३३ लाख १९ हजार बराबरको क्षति भएको बताइएको छ । अविरल वर्षापछि..
बिरानो बन्दै गाउँ–घरमा सारंगी
बेनी । कुनै दिन बम्बई गोरखपुर र कलकत्ताका कोठीमा नेपाली चेली बेचिएको, कतै सासूले बुहारी मारेको अनि फुक्लानको टापुमा लड्दालड्दै वीरगति प्राप्त गरेको खबरको वाहक बनेर गाउँघरमा सारङ्गी रेट्ने गन्धर्व..
तीन जिल्ला हेर्ने गरी प्राधिकरणको कार्यालय स्थापित
गुल्मी । सदरमुकाम तम्घासमा राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय स्थापना भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण निर्देशन समितिको दशौँ बैठकको निर्णयानुसार पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मी हेर्ने गरी गुल्मीमा कार्यालय..
सामसुङ कम्पनीका मालिकलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा ५ वर्ष कैद सजाय
एजेन्सी । दक्षिण कोरियाली मोबाइल फोन उत्पादक कम्पनी सामसुङका अर्बपति मालिकका उत्तराधिकारी ली जेय योङलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा ५ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । दक्षिण कोरियाको सोलस्थित एक अदालतले भ्रष्टाचार गरेको..
अब नेपालमा ७७ वटा जिल्ला कायम हुने
काठमाडौं । रुकुम र नवलपरासी जिल्ला टुक्रिएर ४ जिल्ला बन्दा अब नेपालमा ७७ जिल्ला कायम हुने भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश नं। ४ मा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता..
Results 1994: You are at page 35 of 67